Umqondiso oPhakamileyo: Bala owakho ngeFomyula yethu eyiyo yeAstrological - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Umqondiso wokunyuka: Bala owakho usebenzisa eyona Fomula inokuthenjwa
Yenza uphawu lwakho lokunyuka kunye nekhaltyhuleyitha yethu kwaye ufumane ulwazi olupheleleyo kubuntu bakho bangaphakathi, kunye nokufunda ukuba abanye abantu bakubona njani. Luthini uphawu lwam olunyukayo?
Uphawu lwakho olukhulayo yindawo ebalulekileyo kwitshathi yakho yokuzalwa. Kubuchwephesha beenkwenkwezi, ibalaselisa indlela oziphethe ngayo, kwaye ityhila ukuqonda okubalulekileyo kwisimo sakho sengqondo kwabanye kwaye ichaze nendlela abanye abantu abakubona ngayo. Fumanisa umntu onyukayo kunye nesibalo sokubala esinokuthenjwa nesimahla kwaye ufunde ngendlela ekuchaphazela ngayo uphawu lwelanga kunye nolwalamano lwakho!
Bala uphawu lwakho olukhulayo
Uthini uphawu lokunyuka kweenkwenkwezi?
Idlala eyiphi indima?
Ngaba lo mqondiso unokuze utshintshe?
Nguwuphi umahluko phakathi kokunyuka kunye nomqondiso wenyanga?
Kwiinkwenkwezi, uphawu lwakho nokunyuka kudlala indima ebalulekileyo ekubunjweni kobuntu bakho, kunye nayo ikwazisa ulwazi olongezelelekileyo kwisimboli ye-zodiac. Ke, uyazibuza ukuba loluphi uphawu lwam olunyukayo? Ukuba kunjalo, ukwindawo elungileyo ngenxa yokuba ubulela kwisimulator sikaSusan Taylor, awuyi kuba nayo impendulo ngokukhawuleza!
Isibalo sokubala esiphumayo: Isiphumo esithembekileyo nesichanekileyo!
Ukubala uphawu lwakho olunyukayo, kufuneka uyazi indawo yakho yokuzalwa kodwa kunye nosuku kunye nexesha elichanekileyo lokuzalwa kwakho. Emva koko, a Ukufundwa kwetafile yeenkwenkwezi kuya kulandela ukumisela indawo apho unyukela khona esibhakabhakeni ngexesha lokuzalwa kwakho.
Umhla, ixesha kunye nendawo yokuzalwa:
Usuku Lomhla 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Inyanga eyoMqungu eyoMdumba eyoMdumba kwinyanga kaJuni kwinyanga kaOkthobha kwinyanga yeDwarha kweyoMnga kwiyure iyure 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INgcaciso eMfutshane 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
U% tyikitya% unyuka
Bala omnye umntu onyukayo
Uphawu oluphakamayo, ekwabizwa ngokuba yi-cusp (okanye ukuqala) kwendlu yokuqala yeenkwenkwezi, iboniswa kukudibana kwesibhakabhaka kunye ne-ecliptic. Ukuze ukubalwe, ungasebenzisa inkqubo yekhompyuter okanye usebenzise iTafile yeZindlu , ebonisa inqanaba le-Ecliptic apho umntu onyukayo ekhona ngokwexesha lesiphelo leetshathi yokuzalwa kunye nobume bendawo yokuzalwa komntu.
Ilanga lithatha malunga nenyanga ukuwela umqondiso we-zodiac, kodwa ujikelezo loMhlaba lubonisa ukuba umqondiso ophuma phezulu uyatshintsha rhoqo emva kweeyure ezi-2. Ukunyuka kwakho kumiselwa lixesha nendawo yokuzalwa. Kungenxa yeso sizathu le nto umntu ozelwe ngosuku nonyaka omnye njengawe, engafani nawe kwaphela!
> Kutheni ungakhangeli i-horoscope yakho yemihla ngemihla kunye neyakho Inkqubela phambili yonyaka <
Isibalo sethu sokubala esinyukayo sinokuthenjwa nge-100%.
USusan Taylor uchithe iiyure ezininzi ekhuphela oku kubalwa kuyinkimbinkimbi. Uqwalasele iiparameter ezininzi, ezinje ngamaxesha ahlukeneyo, ihlobo okanye iiyure zasebusika njl. sifumana imiyalezo emininzi esazisa ngale nto. Nangona kunjalo, qiniseka ukuba umqondiso okhulayo onikwe yisimulator ulungile.
Fumana ulwazi ngakumbi kwiimpawu zakho:
Up️ Funda kwi izindlu zeenkwenkwezi kunye Bala umqondiso wenyanga yakho .
Ukongeza ekubeni nomqondiso welanga, unokonyuka kwakhona. Imele Inqaku elibalulekileyo kwitshathi yakho yokuzalwa ekufuneka ngokungafaniyo yahluke kuphawu lwelanga, ekwabizwa ngokuba luphawu lwakho lwe-zodiac. Ibonisa indlela oziphatha ngayo nabanye, kunye nayo ibonisa kwakhona umfanekiso uwunika abantu ongabaziyo. Olu phawu lukwanxulumene ngokusondeleyo nenkangeleko yakho yomzimba kunye nesimbo.
Uphawu olukhulayo lumele olwakho 'umntu wangaphakathi', Intsingiselo yokuba ungubani ngaphakathi. Inokufumaneka kwindlu yeenkwenkwezi ye-1, ongumqondiso owavela empuma ngexesha lokuzalwa kwakho.
Inkcazo yobuntu bomthonyama iya kugqitywa ngakumbi ukuba sijonga indawo yeLanga kunye nendawo yokunyuka kwitshathi yabo yokuzalwa. Le ndlela, Unokuba neempawu ezichaseneyo, kodwa ekugqibeleni ziyahambelana. Ukuba awuziqapheli kwinkcazo yesibonakaliso sakho selanga, kunokwenzeka ukuba uphawu lwakho lokunyuka luthathe phezulu, ngaphandle kokuba luphawu lwakho lwenyanga olubalaseleyo, oku kunjalo ikakhulu kubafazi abaninzi.
yintoni i-capricorn horoscope
Iyintoni indima yomqondiso okhulayo? - Imele isiqu sakho esingaphakathi, esinzulu
NgokukaSusan Taylor, intloko yethu ngeenkwenkwezi, sihlala sifana nomqondiso wethu onyukayo kunokuba sibe ngumqondiso welanga emva kweminyaka engama-30. Ewe kunjalo, oku kusenokwenzeka ukuba kuchaza ukuba kutheni uninzi lwenu lungaziqapheli kwinkcazo yomqondiso wakho.
Uphawu olukhulayo 'bubuntu bakho bangaphakathi', into oyiyo ngaphakathi kwindlu yokuqala yeenkwenkwezi. Ibekwe malunga nenzala, kwindlu yesi-7, emele 'mna + enye', kwaye ke ichaphazela ubudlelwane bakho kunye namabali othando.
Inkqubo ye- Inkcazo yobuntu bomthonyama iya kugqitywa ngakumbi ukuba sijonga indawo elikuyo iLanga kwitshathi yabo KANYE nakwimeko yokunyuka kwabo. Singanemiqondiso eyahluke mpela, kodwa eyongezelelekileyo!
Umzekelo, a Ilanga leCapricorn Aries iyenyuka iya kubonakala ngakumbi kwaye ihlalutye kune-Aries sun Aries ephumayo, eya kuba ngaphezulu kwayo yonke into engacacanga kwaye icaphuke.
Ngaba uphawu lokunyuka komntu lunokutshintsha?
Suku, ukunyuka akuguquki ebomini, kuba kuxhomekeke kumhla, ixesha kunye nendawo yokuzalwa komntu, yinxalenye yetshathi yokuzalwa kwaye ke ayitshintshi.
Uyintoni umahluko phakathi kwesibonakaliso seNyanga kunye nenyuka? Ngaba uphawu lwakho lokunyuka lubalulekile?
Akukho lungelelwaniso phakathi kweempawu zethu zeNyanga kunye nabanyukayo kwaye ewe, umntu wakho onyukayo (ngandlela ithile) ubaluleke ngaphezu komqondiso wenyanga.
Umqondiso welanga yindawo yeLanga kwitshathi yakho yokuzalwa. Ukuba iLanga liseCapricorn ngoJanuwari 13, umzekelo, uyiCapricorn.
Uphawu lweNyanga yindawo yeNyanga kwitshathi yakho. Esi sikhundla sixhomekeke kwixesha lakho lokuzalwa kuba iNyanga ihamba nge-zodiac ngokukhawuleza okukhulu! Kuthiwa umqondiso wenyanga unefuthe ngakumbi emfazini kunakwindoda kuba imele indlela abonakalisa ngayo ubufazi kunye nohlobo lomfazi alulo (umzekelo, umfazi oneNyanga e-Leo uya kuba ngaphezulu kwaye icala elivuthayo nokuba alikho kwiimpawu zelanga lakhe). Kwindoda, uphawu lwenyanga luya kugxininiswa kancinci, kwaye luphawu lwelanga oluya kuqatshelwa ngakumbi kuye. Isikhundla seNyanga kwitshathi yakhe yokuzalwa iya kubonisa indawo yakhe yobufazi, ubuntununtunu bakhe kodwa nohlobo lomfazi atsala kuye, umama wakhe okanye ubuntwana bakhe ...
Umqondiso okhulayo ubalulekile nakumadoda nakwabafazi. Igqibezela iimpawu zomqondiso we-astral (yiyo loo nto umqondiso welanga).
Umntu unokuba nomqondiso weenkwenkwezi kunye nophawu olukhulayo oluhambelana. Umzekelo, iVirgo sun Capricorn ekhulayo: eneempawu ezifanayo eziyinxalenye 'YOMHLABA': kuthetha ukuba obu buntu buyinyani, ikhonkrithi, iququzelelwe kwaye yaziswa kwakhona.
Umntu unokuba nophawu lwenkwenkwezi olwahluke kakhulu kwaye unyuke, ezo zohluke kakhulu. Umzekelo: i-Aries sun Capricorn ephuma; Apha ii-Aries ziya kudlamka, zikhawuleze, zixakeke kwaye zixakeke, ngokuchaseneyo neCapricorn ecothayo, ezinze ngakumbi, evuthiweyo kwaye ezimisele. Olu hlobo lwendibaniselwano ngamanye amaxesha lukhokelela kwimpixano yangaphakathi kodwa ekubonakaliseni, umntu uyayiqonda into yokuba ivelisa ubuntu obutyebileyo, umntu onyukayo olapha ehambelana nomqondiso, ulungelelanisa
Ngaphambi kokungena kwiinkcukacha zeeplanethi, izindlu zeenkwenkwezi kunye neendawo zokucwangciswa kwetshathi yokuzalwa, isazi ngeenkwenkwezi sinolwazi oluncinci ngobuntu bakho ngokujonga kwitshathi yakho yokuzalwa (ngolu hlobo lulandelayo):
1 / Indawo elikuyo iLanga ngophawu, oko kukuthi, uphawu lwakho lweenkwenkwezi. Oku kumele wena, ukuthanda kwakho, nenxalenye yakho oyaziyo.
2 / Uphawu olukhulayo, ebonisa wena nembonakalo yakho yomzimba.
3 / Indawo iNyanga ekutyikityeni, Eqaqambisa ilizwe lakho elingaphakathi, ubuntununtunu bakho kunye necala lakho lobufazi.
Fumanisa ifayile ye Intsingiselo yelanga, inyanga kunye nomqondiso ophumayo .
intsingiselo yokomoya ye-888
Umthombo: Uphawu oluPhakamayo: Imask yakho ye-Astrological, uJeanne Avery, umhla wokupapashwa: nge-15 kaJanuwari 1982
Ukunyuka komqondiso weAries
Ukunyuka kwama-Aries kunesibindi kwaye kungxamisekile, Echaza ukuba kutheni bekwangaphambi kwabanye. Ukhuphiswano nokuthetha phandle zizinto ezibalulekileyo ebomini bakho, nangona ubukrwada bakho ngamanye amaxesha bungena phantsi kolusu lwabantu. Ukuzimela kwakho kuyathandeka kwaye kongeza umnqweno wovuyo kubuntu bakho.
♥ Ukuhambelana kothando kwe-Aries: kuwe, Libra, Leo kunye neSagittarius ziimpawu ezithandekayo.
Umqondiso wokunyuka kweTaurus
I-Openly sweet and passive, ifayile ye- Ukuphakama kweTaurus kunecala elinenkani kubuntu babo oko akufuneki kuphazanyiswe. Ukuziphatha kwakho okuzolileyo kunye nobulumko kuhlala kukunceda ukuba uphume kwiimeko ezinzima. Xa kufikwa kunxibelelwano, aba bantu bayamangalisa kwaye bazi ngqo indlela yokuveza izimvo zabo.
♥ Ukuhambelana kothando lweTaurus: Uya kufumana ukudityaniswa kweScorpio, iVirgo kunye neCapricorn.
Ukunyuka komqondiso iGemini
Ukunyuka kweGemini ngu ibhokisi yencoko yokwenene kwaye uyakuthanda ukunxibelelana nokwabelana ngezimvo zabo. Uyakuthanda ukudityaniswa kunye nokunxibelelana nabanye abantu ngokuqinisekileyo yeyona nto yakho! Nangona kunjalo, uyadika ngokulula kwaye unengxaki yokujonga izinto. Inyaniso kukuba ingqondo yakho enomdla iphazamiseka ngokulula kwaye awunakho ukukhula kufuneka ugxile.
♥ Ukuhambelana kothando lweGemini: Ufumana okona kulungileyo ngeSagittarius, iLibra kunye neAquarius.
Umqondiso wokunyuka komhlaza
Ukunyuka komhlaza uziva u imfuneko enkulu yokuthanda nokukhathalela abantu. Ukulungele ukwenza nantoni na eyimfuneko ukugcina abantu abasondeleyo kuwe bonwabile kwaye bekhuselekile. Uyabaqonda abantu kwaye ukufumanisa kulula ukwenza abahlobo abatsha. Unovakalelo olukhulu kwaye ungoyena mntu uchaphazeleka kakhulu xa imeko yeenkwenkwezi enjengeNyanga eNtsha okanye iNyanga epheleleyo iqhubeka. Uyakuthanda ukuzigcina ukwimo elungileyo kwaye utyhala umzimba wakho ukuya kumda.
♥ Ukuhambelana komhlaza: Ufumana okona kulungileyo ngeCapricorn, iScorpio kunye nePisces.
Ukunyuka komqondiso uLeo
Ukunyuka kuka-Leo kukhanya ngokuqaqambileyo kwaye kubonisa iitalente zabo. Ukonwaba nokuba liziko lokuqwalaselwa konke kubalulekile kuLeo ascendant. Unyaniseke kakhulu kodwa uhlala unengxaki yokubeka ithemba lakho kwabanye abantu. Ukuqonda iingxaki zabanye abantu akukho lula kuwe kuba uzicingela wedwa.
U-Leo uthanda ukungqinelana: Ufumana indawo ezininzi ezifanayo kunye ne-Aquarius, i-Aries kunye ne-Sagittarius.
Umqondiso wokunyuka kweVirgo
Umsebenzi okhutheleyo wokwenene
Ukunyuka kweVirgo yenye yezona zinto zinzima kwaye kunzima phakathi kweempawu, nokuba kungangqinelani okuncinci kunokuthumela iVirgo ijikeleze ibe ngumsindo. Uthatha yonke into uyithathele entliziyweni kwaye uchaphazeleka kakhulu kukutshintsha kwendalo. Uyakuthanda ukuzibekela iinjongo kwaye usebenza nzima ukufezekisa. Ukuzimisela kwakho kunye nenkuthazo yeyesibini kuye, kuba akukho nto ingenakwenzeka.
♥ Ukuhambelana kwothando lweVirgo: Iipisces zikufundisa ukuba uphumle kwaye ucinge ngexabiso layo yonke into. Uziva ukhululekile xa uphakathi kweCapricorn kunye neTaurus.
Ukunyuka komqondiso iLibra
Ukunyuka kweLibra kuthanda ukuhlala ngokuvisisana kwaye kugxile ekudaleni imeko yoxolo. Iimpikiswano neengxabano zenza aba bantu bangonwabi kuba abayazi indlela yokujongana nembambano. Bahlala benempumelelo enkulu kubuchwephesha, nangona izinto zothando zintsonkotha kancinci.
Inyanga yelanga kunye nentsingiselo ekhulayo
♥ Ukuhambelana kwothando kweLibra: IGemini kunye neAquarius, imiqondiso yomoya njengawe, ivuselele ingqondo yakho ngelixa iiAries zikutsala ngendlela eyingozi!
Umqondiso wokunyuka kweScorpio
Ukuvuselela iimvakalelo kunye nokufihla, awukuthandi ukutyhila uninzi lomntu onguye, iScorpio ascendant. Ukuzivula kwaye uzivumele ube sesichengeni kunzima kuwe kwaye ukuba abantu bafuna ukukwazi, kunyanzelekile ukuba basebenze nzima. Xa uthandana, uyawa kwaye awukulungelanga ukuncama ubudlelwane bakho.
♥ Ukuhambelana kwescorpio uthando: iTaurus iyaziqonda iimfuno zakho, kunjalo nangeCancer. Unomdla kwiPisces, kodwa ke lumka, baya kukuphambanisa!
Ukunyuka komqondiso weSagittarius
Ukunyuka kweSagittarius kune Ingqondo emangalisayo evulekileyo kwaye ekulungele ukufunda. Bahlala behamba phambi kwabo oko kuthetha ukuba banengxaki yokujolisa kwinto ephambi kwabo okwangoku. Ngethamsanqa kuwe, uburharha bakho kunye noncumo oluqaqambileyo kukusindisa ekubeni ujongane nengqumbo yabanye abantu. Unengqondo esebenzayo ngokwenene kwaye uzive ufuna ukuhlala ushukuma. Xa unyanzelwe ukuba ujolise kwaye ugxile ngokufanelekileyo uhlala ukhawuleza udikwe.
♥ Sagittarius uthando ukungqinelana: IGemini iyakuthanda, uLeo noAries babelana ngombono wakho ophefumlelweyo wobomi.
Umqondiso wokunyuka kweCapricorn
Ukunyuka kweCapricorn kubi kakhulu kwaye akaze kuvumele ubuso babo bube ngathi butyibilika. Intloko yakho ithe tye kwaye uyazi ukuba ufuna ntoni. Ukusilela kunye nokumosha ixesha zizinto ezimbini ozithiye kakhulu ebomini. Imali isebenza njengesikhuthazo esikhulu kuwe kwaye ikhuphe isimilo sakho esimiselweyo nesigxile. Ukuba ungaphantsi kweminyaka engama-30 ubudala, ngokungathandabuzekiyo uziva ukhule ngakumbi kwaye uzinzile kunontanga bakho.
♥ Ukuhambelana kothando lweCapricorn: Umhlaza uyayivuyela indlela oziphethe ngayo. Iimpawu zeTaurus kunye neVirgo ziyazi ukuba zidlala njani ngobukrelekrele bakho.
Umqondiso wokunyuka kwe-Aquarius
Ukunyuka kwe-Aquarius kunjalo sihlala kakhulu kwaye sithanda ukuba nexesha elimnandi, nangona uthando lwabo lokonwaba ngamanye amaxesha lunokuba sengozini kubudlelwane bosapho. Unomtsalane omangalisayo kunye ne charisma ekufumana ukuba uqaphele. Uzele bubomi, ukuhleka nothando! Ubuntu bakho obuqaqambileyo buthetha ukuba abanye abantu bayakuthanda ngephanyazo.
♥ Ukuhambelana kothando lwe-Aquarius: Awunakuyichasa inkampani kaLeo okufundisa ukuba abanye abantu bangamalungisa kunabanye. Kwicala lencoko, iLibra kunye neGemini ngabangeneleli kwinqanaba lakho.
Umqondiso wokunyuka kwePisces
Uvakalelo, uvelwano kunye nokwamkela Zizichazi ezilungileyo ezisetyenziselwa ukuchaza ukunyuka kwePisces. Ufana nesiponji, uthatha iimvakalelo zabantu kwaye kwangoko wenze unxibelelwano nabo. Uyayicaphukela idrama kwaye uxabana nabantu obathandayo. Xa uziva kakubi ngento ethile, kunokuba ujongane nemeko, uhlala ubaleka.
♥ Iintlanzi zothando ukuhambelana: Umhlaza kunye ne Scorpio zabelana ngeenjongo zakho zothando.
Ubuntu obonyukayo buchaziwe
Cofa kweyakho IiAries ITaurus IGemini Umhlaza Leo Intombazana ILibra IScorpio Isagittarius Capricorn U-Aquarius intlanzi
Ngabaphi abadumileyo beHlabathi abaDumileyo?
amaphupha amazinyo aqhawukayo
ukulukuhla indoda e-capricorn
indlela yokutsala amadoda e-cancerian
umthunywa oyimfihlo x umfundi oyindoda
Ukutshisa ikhandlela elimnyama kuthetha ntoni